जीवनको त्यो क्षणमा पनि खुसी हुन सकिनँ : मिस नेपाल अनुश्का श्रेष्ठसंग अन्तरङ्ग (भिडियो सहित) - samayapost.com
जीवनको त्यो क्षणमा पनि खुसी हुन सकिनँ : मिस नेपाल अनुश्का श्रेष्ठसंग अन्तरङ्ग (भिडियो सहित)
समयपोष्ट २०७६ जेठ १७ गते १८:१८
काठमाडौँको टेकू स्थायी घर भएकी अनुश्का श्रेष्ठ बनिन्– २०१९ की मिस नेपाल वल्र्ड । धापासीस्थित त्रियोग हाईस्कुलबाट विद्यालयस्तरको शिक्षा पूरा गरेकी उनी पल्स टु सकाउनेबित्तिकै अष्ट्रेलिया लागेकी थिइन् । सिड्नीको क्याथोलिक युनिभर्सिटीमा स्नातक गरेर उतै बैङ्कको जागिरमा रमाइरहेकी उनलाई सधैँ नेपालमा केही गर्नै पर्छ भन्ने लागिरह्यो । जहाँ पनि जहिले पनि सकारात्मक प्रभाव पारिरहन सकौँ जस्तो लागिरहने उनलाई स्वदेशमा केही गरेर देखाउन मिस नेपालको प्लेटफर्म उपयुक्त लाग्यो । मिस नेपाल प्रतियोगिताकै लागि भनेर स्वदेश फर्किएकी उनले अन्ततः मिस नेपाल वल्र्डको ताज हात पार्न सफल पनि भइन् । उनै श्रेष्ठसँग समयबोधले गरेको अन्तरङ्ग कुराकानी :
एकाएक सेलिब्रेटी हुँदा कस्तो महसुस भएको छ ?
ताज जित्दा एकदम खुसी लाग्यो । गर्भको महसुस भयो । जिम्मेवारी महसुस भयो ।
मिस नेपाल वल्र्ड हुन्छु भन्ने लागेको थियो ?
कतै न कतै आत्मविश्वास त थियो । त्यति पनि नहुने हो भने अहिले यहाँ हुँदैन थिएँ होला । गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो र त्यसका लागि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो र गरेँ पनि ।
जहिले पनि, जहाँ पनि सकारात्मक प्रभाव पारौं भन्ने सोच थियो । त्यसका लागि समयानुसार यो मञ्च उपयुक्त पनि लाग्यो ।
बैङ्कको जागिर छोडेर मिस नेपालमा भाग लिन कसले प्रेरित गर्यो ?
बैङ्कको जागिरभन्दा पनि कतै गइरहेको जीवनलाई छोड्न केही न केही ठोस कारण त चाहिन्थ्यो । जहिले पनि, जहाँ पनि सकारात्मक प्रभाव पारौं भन्ने सोच थियो । त्यसका लागि समयानुसार यो मञ्च उपयुक्त पनि लाग्यो । समय पनि उचित लागेपछि त्यो ठूलो कुरा हुँदाहुँदै पनि निर्णय लिन अलि सहज भयो । किनकि म निकै ठूलो कुराको लागि आइरहेकी थिएँ ।
यहाँसम्म आउन के–कस्ता सङ्घर्ष गर्नुपर्यो ?
काम गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै थिए । यो मिस नेपाल भन्ने प्याजेन्टमा थुप्रै विधाहरूमा सिकाइ हुन्छ । बाहिर सुन्दरता, बौद्धिकता परीक्षण, लवाइ–खवाई हिँडाइदेखि थुप्रै विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । ती सबै विषयवस्तुको लागि समय व्यवस्थापन गर्दै लैजानु ठूलो चुनौती थियो । त्यसलाई राम्ररी नै वहन गरेँ जस्तो पनि लाग्छ ।
म यहाँ किन छु भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने रहेछ । साथै, जतिसुकै प्रेसर आउँदा पनि सकारात्मक सोच बनाइराख्न सक्नुपर्ने रहेछ ।
मिस नेपाल हुन के चाहिँदो रहेछ, शारीरिक सौन्दर्यता वा बौद्धिक सौन्दर्यता ?
मिस नेपाल हुनका लागि बुझाइ चाहिँदो रहेछ । म यहाँ किन छु भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने रहेछ । साथै, जतिसुकै प्रेसर आउँदा पनि सकारात्मक सोच बनाइराख्न सक्नुपर्ने रहेछ ।
मिस नेपाल भएपछि अब तपाईं फेरि जागिरमा फर्कने वा यहीँ समाजसेवा गर्ने ?
मिस नेपालको ट्रेनिङले सिकाएका थुप्रै कुरामध्ये एउटा जागिरको पछि नकुद भन्ने हो । राम्रो काम गरे अवसर जहाँ पनि भेटिन्छ । पहिलेदेखि नै नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । अब जागिरको पछि लाग्ने भन्दा पनि काम राम्रो गर्ने भन्ने सोच छ ।
म पछिल्लो पटक बैङ्किङ क्षेत्रमा काम गरिरहेको थिएँ । आर्थिक क्षेत्र मेरो रुचिको क्षेत्र पनि हो । व्यवस्थापन आर्थिक क्षेत्रतिर नै लाग्छु ।
नेपालमा कुन क्षेत्रमा जाने सोच्नुभएको छ ?
मेरो व्यवस्थापन क्षेत्र हो । म त्यही क्षेत्रतिरै लाग्छु भन्ने लाग्छ । म पछिल्लो पटक बैङ्किङ क्षेत्रमा काम गरिरहेको थिएँ । आर्थिक क्षेत्र मेरो रुचिको क्षेत्र पनि हो । व्यवस्थापन आर्थिक क्षेत्रतिर नै लाग्छु ।
भविष्यमा राजनीति वा चलचित्रतिर जाने सोच छ कि ?
प्रत्यक्षरूपमा यी दुवै क्षेत्रमा आउने मेरो सोच छैन ।
पैसाभन्दा ठूलो नाम भनेर नेपाल फर्किनुभयो, विदेश वा स्वदेशमा रहेका युवाहरूलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
जीवनमा आफ्नो प्राथमिकता के हो ? त्यो राम्ररी बुझौँ, दोष दिने पवबृत्ति नराखौँ । नेपालले गर्दा यो भयो । विदेशले गर्दा यो भएन नभनौँ । जे भयो, त्यसको कारण मै हुँ भन्ने मनसाय राखौँ ।
प्राथमिकता हरेक मानिसमा समयानुसार फरक हुन्छ । त्यही मानिसलाई कुनै समय नामभन्दा दाम महत्वपूर्ण थियो होला । गाँस, बास र कपासको आवश्यकता पूरा नभएको मान्छेलाई नामले के गर्नु ? त्यो बुझ्न जरुरी छ । जीवनमा आफ्नो प्राथमिकता के हो ? त्यो राम्ररी बुझौँ, दोष दिने पवबृत्ति नराखौँ । नेपालले गर्दा यो भयो । विदेशले गर्दा यो भएन नभनौँ । जे भयो, त्यसको कारण मै हुँ भन्ने मनसाय राखौँ ।
यहाँ सबैलाई अरूले के गर्नुपर्छ, सबै थाहा छ । आफूले के गर्नुपर्छ थाहा छैन ।
तपाईंको विचारमा नेपालमा विकास हुन नसक्नुको कारण के होला ?
नेपालमा विकास भइनै रहेको छ जस्तो लाग्छ । हामी कता हेर्छौं भन्ने कुरा हो । धूलो बाटो देख्दा र समय–समयमा बत्ती गइरहँदा नेपालमा विकास नभएको जस्तो देखिएला तर विकास भइरहेको छ । जति हुनुपर्ने हो, त्यो नहुनुको कारण भनेको नेपालमा काम छैन भनेर नै हो । यहाँ सबैलाई अरूले के गर्नुपर्छ, सबै थाहा छ । आफूले के गर्नुपर्छ थाहा छैन ।
तपाईंको विचारमा पूर्ण खुसी ?
पूर्ण खुसी केही पनि होइन । मान्छेको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि एकपछि अर्को खोजिहाल्छ । मैले मिस नेपाल वल्र्डको ताज जितेँ, अब मिस वल्र्ड भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ  । मिस वल्र्ड भएपछि अरू केही ठूलो गरौँ जस्तो लाग्ला । पूर्ण खुसी भनेको आज सन्तुष्ट हुन सक्नु नै हो ।
सबैभन्दा बढी खुुसी भएको क्षण ?
दुई महिनाअघि सिन्धुपाल्चोक गएकी थिएँ । त्यहाँ काम गर्नुअगाडि आफूले काम गर्ने ठाउँ हेरौँ न भनेर गएकी थिएँ । त्यहाँ मैले मेरो दिमागमा भएको कुरालाई अगाडिबाट प्रत्यक्ष देख्न पाउँदा निकै खुसी लाग्यो ।
अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती ?
जम्मा अठार–उन्नाईस वर्षको हुँदा सोसल मिडिया हेरेर अरूले कस्तो गरे, मैले किन गर्न सकिनँ भनेर असन्तुष्ट हुने । आफू जे–जति छु, त्यसमा खुसी हुन नखोजेर मैले योभन्दा बढी गर्न सक्थेँ भनेर दुःखी हुने ।
आफूले आफूलाई धेरै घोच्नु । आफू जम्मा अठार–उन्नाईस वर्षको हुँदा सोसल मिडिया हेरेर अरूले कस्तो गरे, मैले किन गर्न सकिनँ भनेर असन्तुष्ट हुने । आफू जे–जति छु, त्यसमा खुसी हुन नखोजेर मैले योभन्दा बढी गर्न सक्थेँ भनेर दुःखी हुने । जीवनको सबैभन्दा धेरै खुसी हुने क्षणमा पनि खुसी हुन सकिनँ । आफूमा जे कुरामा पनि कमी मात्र खोजेँ, त्यो गल्ती जस्तो लाग्छ ।
बढी डर लाग्ने कुरा ?
परिवारको स्वास्थ्य ।
तपाईंसँग मात्र भएको विशिष्ट प्रतिभा ?
कुनै पनि कुरा खुला मनले सिक्न खोज्छु ।
तपाईंको पर्समा कति पैसा हुन्छ ?
दुई हजार ।
सबैभन्दा बढी खर्च केमा गर्नुहुन्छ ?
महँगो खानुपर्दैन तर अलि धेरै खानुपर्छ । त्यस कारण खानामा बढी खर्च हुन्छ ।
कस्तो पहिरनमा हट देखिन्छु जस्तो लाग्छ ?
ब्लेजर प्यान्ट र सर्टमा कम्फर्टटेबल लाग्छ र कन्फिडेन्ट पनि ।
आफ्नो अनुहार कति पटक मोबाइलमा हेर्नुहुन्छ ?
आजकाल धेरै हेर्दिनँ । पहिले हेर्थें । अहिले त्यसको लागि समय छैन । फोटो खिच्नुपर्यो भने मात्र क्यामेरा अन गर्छु ।
प्रेम भनेको सन्तुष्ट पार्ने भावना हो । भोक लाग्दा खाना खाँदा जति आनन्द आउँछ नि, प्रेम पनि त्यस्तै भावना हो ।
सबैभन्दा बढी माया गर्ने व्यक्ति ?
प्रेम प्रस्ताव आए होलान् नि ?
धेरै त होइन, ठीकै ।
केटा मान्छेको मन पर्ने कुरा ?
बुझ्न खोज्ने, सिक्न खोज्ने र प्रयास गर्न खोज्ने बानी  ।
बिहे कहिले गर्ने ?
चार–पाँच वर्षपछि ।